सिंजामा ७० करोडका प्रादेशिक योजना «
सिंजामा ७० करोडका प्रादेशिक योजना
प्रकाशित मिति : श्रावण ३१, २०७६ शुक्रबार
जुम्ला-कर्णाली प्रदेशका सांसदहरू यतिबेला सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न गाउँगाउँमा पुगेका छन् ।
प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको बुझाइ सन्तुष्टि र गुनासा सुन्न सांसद जिल्लामा पुगेका छन् भने, सोही अवसरमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि प्रादेशिक योजनासमेत सार्वजनिक गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले वडास्तरको विकासमा जोड दिने, प्रादेशिक योजनाले निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका ठूला योजनामा लगानी गर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।
जुम्लामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जुम्ला क्षेत्र नं. ख का सांसद पदम रोकायाले चालू आवमा क्षेत्र ख मा पर्ने सिंजा क्षेत्रको विकासका लागि रातो किताबमा उल्लेखित भएका झण्डै ७० करोड बराबरको योजना सार्वजनिक गरे । सडक, विद्युत् खानेपानीदेखि सञ्चारको विकासका लागि निकै लडेर, सबैभन्दा बढी विकास योजना सिंजा क्षेत्रमा ल्याउन सफल भएको समेत उनको दाबी छ ।
अघिल्ला प्रादेशिक योजनामा पारदर्शी तथा सुशासन कायम नभएको, पाटीका कार्यकर्तामात्रै लाभान्वित भएको भन्ने प्रश्नमा उनले, सुशासन तथा पारदर्शिता अभावकै कारण अपेक्षाअनुसार विकास हुन नसकेको उल्लेख गरे । विकास निर्माणका लागि अहिले बजेटको कमी छैन । उनले थपे तर पारदर्शी र सुशासनको कमी हो । यसमा सञ्चारजगतले तिखो नजर लगाउनसमेत सुझाव दिए । जिल्लाको समृद्धि र विकासका लागि अहिले तीन तह स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट बजेट विनयोजन हुने गरेको छ । बजेट प्रशस्त मात्रमा भए पनि जनताका अपेक्षाअनुसारका काम हुन नसक्नु दुःखद पक्ष रहेको उनले बताए ।
कुन योजनामा कति बजेट ?
कर्णाली प्रदेशको क्षेत्र नं. ख जुम्लाको सिँजा भेगमा पर्ने हिमा, सिँजा, कनकासुन्दरी र तिला गाउँपालिका गरी चार स्थानीय तह छन् । सांसद रोकायाले आफ्नै पहलमा चारै स्थानीय तहको बहुआयामिक विकासका लागि ७० करोड बराबरको नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रदेश सरकारले रातो किताबमा उल्लेख गरेको बताए । जसको ३० करो बजेट नाग्म–गमगढी सडक खण्डको ग्राभेलका गर्न छुट्याएको छ ।
हाल सिंजा गाउँपालिकामा ९ किलोमिटरमात्रै ग्राभेल छ । ३० करोडमा नाग्मदेखि मुगु ९६ किलोमिटर ग्राभेल हुने उनले बताए । उनले भने अन्य ४० करोड, सिंजा क्षेत्रको छालाचौर गोठेलबाडाबाट मुगु जोड्ने सडक २ करोड ४० लाख, रानीसैन सडक ७५ लाख, बडुवालवाडा गाउँ सिम्पाटी हुँदै कनकासुन्दरी सडकका लागि ७५ लाख बजेट छट्याएको बताए । जुम्ला जलजला, थालाचौर, गोजिउला, कालाकाँडा मुगुरारा सडक ९० लाख भैसेरी पक्की पुल २० लाख, सुन्नेलावाडा खानेपानी योजना २० लाख, पछैवाडा सिँचाइ योजना १० लाख, माझबाडा कृषि सडक ४० लाख, लुड्कु गाउँ सिँचाइ कुलो ५० लाख बजेट रहेको सार्वजनिक गरे ।
साथै दलित, महिला र पिछडिएको लोहारबाडा ४० लाख, रोकायावाडा दयरापाटा बर्थिङ सेन्टर २५ लाख, मालिका मावि खिच्चने नमुना विद्यालय ५० लाख बजेट छुट्याइको बताए । हेलिप्याड निर्माण ८ लाख, गोरुचौर होमस्टे २० लाख, राडीपाखी उत्पादन २० लाख बत्तिमा करोड ५० लाख गरी झण्डै २३ वटा महत्वका योजना सार्वजनिक गरे । २३ वटा योजनाका ४० करोड बजेट छ । आमनागरिकले विकास निर्माणका क्षेत्र पारदर्शिता तथा गुणस्तरीय गरेको खण्डमा केही वर्षमा सिंजा क्षेत्र कायपलट हुनेसमेत उनको दाबी छ ।
पारर्दशी र सुशासन कायम गर्ने सवालमा अहिले स्थानीय तहमा विकास निर्माण अनुगमन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मात्र गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइदेखि अनुगमन गर्ने गरेको सांसद रोकायाले बताए ।